UZuma we-ANC uqokwe njengeMeya eMgungundlovu District – INSIMBI
EZEPOLITIKI EZOMASIPALA INSIMBI IZINDABA
UZuma we-ANC uqokwe njengeMeya eMgungundlovu District
December 1, 2021 December 1, 2021 Siphelele Xaba	0 Comments
Andiswa Mchunu, eMgungundlovu
Uqokwe njengoSodolobha woMkhandlu omkhulukazi lapha KwaZulu Natal, uMgungundlovu District Municipality uMnuz Mziwokuthula Zuma, engena esihlalweni ebesiqhoqhobelwe nguNksz Thobekile Maphumulo iminyaka eyishumi.
Ukuqokwa kukaMnuz Zuma kulandela ukhetho loHulumeni baseKhaya ekade lubanjwe izwe lonke mhla lulunye kuLwezi kuwona lonyaka.
Lomcimbi wokuqokwa kwamakhansela kanye noSodolobha ububanjelwe eShow Grounds eMgungundlovu, nokade uhanjelwe wuSomlomo kwiSishayamthetho saKwaZulu Natal, iphini likaNgqongqoshe wezokuThutha kuzwelonke uNksz Sindiswa Lydia Chikunga kanye nezinye izicukuthwane.
Ethula inkulumo yakhe okokuqala njengoSodolobha uMnuz Zuma uthe uzokuqeda nya ukugqoza kwezidingo zomphakathi, waphinde wadalula ukuthi kumele kwakhiwe amathuba emisebenzi ukuze kuzohlomula abantu abasha kukhule nomnotho kwisiFunda saseMgungundlovu.
Oqokwe njengeMeya yoMkhandlu omkhulu woMaspala uMgungundlovu District uMziwokuthula Zuma othole amavoti angu-27 weqembu le-ANC. Kwalandela ngemuva kwabakade begaqele lesi sikhundla u-Luke Mary othole amavoti angu-15 yena ongoweqembu leDemocratic Alliance.
Oqokwe njengoSekela kaMeya waloMaspala uSibongile Mabaso we-ANC uthole amavoti angu-27. Olandele uMabaso obegaqele leskhundla uThambokwakhe Madonda ovela eqenjini leDemocratic Alliance othole amavoti angu-15.
Kuvotelwa lezi zikhundla kuvote amakhansela angu-42 kwangu-47, njengoba kubikwa ukuthi amakhansela angu-5 weqembu le-IFP akavotanga kulolu khetho.
Uyaqhubeka umkhankaso ogqugquzela izakhamuzi ukuba zigomele igciwane le-COVID 19 →
“AKUPHEFUMULEKI!” GILIKIDI, NYA!
UMOYA ONGCWELE UMHOLELE OLWANDLE, IGAGASI LAMHOLELA EKUFENI
April 19, 2021 April 19, 2021 Insimbi News Reporter	0
KUVULWE ISICHUSE SIKASIMON MABHUNU SABELO
April 18, 2021 April 18, 2021 Insimbi News Reporter	0